Ubani njengoba ingane kuyiphupho lami ukuba uya emkhunjini handsome Janek? Ongazange bayahlonishwa amandla hero Guslika Stoves? Futhi ekugcineni, abangazange wezwa izinhlamvu ezifana inja Sharik kanye ithangi ngokuthi "Red"? Yebo, sikhuluma edumile Polish TV ewuchungechunge "emathangini avuzayo amane inja" (nabalingisi ayakhanya abaye baba izintandokazi athandwayo).
A yimpumelelo ifilimu lithathelwe incwadi yimpumelelo
Emuva ngo-1967 encwadini ethi by odumile Polish umbhali, imbongi kanye umlobi Yanusha Pshimanovskogo "ithangi amadoda amane" (Ngemva kweminyaka emithathu kusukela ncwadi yabhalwa futhi ishicilelwe ngaphansi ajwayelekile kithi egameni - "emathangini avuzayo amane inja"), okuyinto lwaphumelela ngakho ukuthi wasusa eponymous ewuchungechunge yethelevishini. Lapho ubheka ikusasa, siphawula ukuthi umbhali idlale ifilimu photographer (cameo e isinqamu yokugcina). Uchungechunge, nakuba mayelana nempi, kwakukuhle kakhulu futhi ngendlela ukuzikhohlisa elikhanyayo, okuyindawo lusuka okuthile okuzenzela ...
Indaba Umdlalo sika - isiphetho iqembu ithangi, ngubani yaze yanikezwa igama elithi "Red": Olgerda Yarosha, uJan Kos, Gustav uHelen Gregory Saakashvili Tomas Chereshnyaka futhi inja othandekayo Sharik (zohlobo yayo - unguMalusi German). Zonke ndawonye, ngezinye izikhathi awela nzima futhi ngezinye izikhathi izimo ezihlekisayo ngokuphumelelayo nanoma ibuphi ubunzima kanye nezinkathazo.
Naphezu kweqiniso lokuthi amaqhawe uchungechunge esizithandayo - isithombe lilonke yomunye wabalingiswa iyona sibonelo. I sibonelo Olgerda Yarosha uvele Viktor Tyufyakov, ongowokuzalwa e-Altai. Wathweswa iziqu esikoleni ithangi kwedolobha Poltava. I lamabutho kwaba umlawuli lokuqala inkampani ithangi, futhi zihlukaniswa ngokwabo empini ngenxa Studzianki - kakade njengendlela umkhuzi Ibutho. Nokho, naphezu impumelelo, Victor ngoba ukuthanda kwakhe ubulungisa futhi kuqondile uhlamvu ayisenayo zonke esidumisa futhi izihloko.
Kodwa "isizwe" akwenzele umsebenzi walo. Ngemva kokubukela i-uchungechunge ithelevishini "emathangini avuzayo amane inja" (abadlali wadlala kahle ngakho izindima zabo, ukuthi eziningi ziye zakubona kulezi izithombe ngokwabo noma abangane babo) ePoland yayiqhutshelwa umhlangano Veterans-tank. Ngosizo ezinqolobaneni Polish amasotja wathola Ibutho lakhe nomyali. Poland wamhlangabeza wayeyiqhawe, kodwa ekhaya lapho sekumcacela ukuthi umlawuli abanesibindi Algirdas kuyinto Viktor Tyufyakov, wabuyela imiklomelo iziqu.
Nokho, sekuyisikhathi ukubuyela ethangini nezisebenzi "Olubomvu." Futhi siqala, mhlawumbe, umlawuli lokuqala onamileyo ezinhlanu (uMalusi German okuthiwa Sharik - uphinda abe yilungu agcwele crew ithangi). Indima isikhulu onesibindi Olgerda Yarosha Roman Wilhelmi kudlalwa (iziqu Warsaw Theatre Academy, wayesebenza enkundleni ngoba engaba ngu-30, naye odlale kumafilimu ezifana "bhu" nesithi "Umsebenzi likaNikodemu Dyzma" ngempumelelo).
Algirdas ubuzwe - a Pole, kwaba nesangoma sezulu esikhathini eyandulela impi. I lamabutho armored kwakuqashwa njengoba nomfundisi ofundisa, kodwa ngokushesha waqokwa induna "Ginger" nezisebenzi. Washona ngo-1945 ngesikhathi Gdansk.
Pole handsome Janek alizibonanga uyise kusukela ngo-1939, kusukela Vasterplatte ukuzivikela. Edonswa yokusesha uyise, usehlane, eSiberia. Kukhona wahlala umzingeli efim Semenovich. Lapho ezwa isethi empini Polish amayunithi, wanquma ukubaleka, kanye inja yakhe Sharik ngaphambili. Njengoba ayesethole wenqaba ngoba ubungqabavu bobusha bakhe, wenza ungalilahli ithemba. Ebonisa ukuthi zinembile sokudubula bese ekutholeni kanye Sharik phakathi namakhulu abanye imikhono, wayesalokhu wacela.
Young, kumnandi, bakhulela impi futhi uthandana umhlengikazi Russian Marusya (for the umbala izinwele wanika obathandayo isidlaliso Spark wakhe) Indoda odlale ifilimu Polish kanye yaseshashalazini umlingisi Yanush Gayos. Yena ubusebenza amafilimu kanye yaseshashalazini udlala kuze kube yilolu suku. Futhi umlingisi waklonyeliswa imiklomelo eminingi. Kodwa uma, ngemva okuphumelela indima abanesibindi ithangi umshayeli, Yanush Gayos akakhishwanga kakhulu ngendlela iminyaka engu-10.
Futhi nakhu okunye, ungalokothi ukulahlekelwa inhliziyo Pole, lomkhumbi olamandla ongedluli emathangini avuzayo ezine - Gustav uHelen, futhi abangane nje Gustlik. Ngaphambi kwempi wayesebenza njengoba imboni wensimbi. Nokho, Wehrmacht ngabuthelwa amabutho ithangi nabanye futhi wathumela kuJehowashi Eastern Front, wakuqonda okwakushiwo ethangini, lapho eyeke kuya iRed Army. Ukuba sesisebenza Polish uthweswe icala kuqala, bese - the umdubuli kambayimbayi. Ngenxa yokuthi ngemva kokufa Algirdas baba ubudala ilungu endala izisebenzi, Gustlik mhlawumbe ezinengqondo kakhulu kunabo bonke inkampani. Ngezinye izikhathi ngisho yena ukhuza abangane bakhe, ukuze bakwenze lokhu kubulawa kwabantu hhayi uchinyali iziboshwa amaJalimane - ngoba akufanele futhi ube njengendoda isitha. Ngenxa yalokho wakubo omusha Obergefreiter Kugel ngaphansi ukusekelwa Gustav baba iPhini Usigaxamabhande ka Ritzen futhi bathathwa ifake isandla ekubuyiselweni kwalo. Endleleni, Gustav Jeleń owayo uthandana countrywoman wakhe (endleleni, sinalo izihlobo Gustlika amaJalimane), okuyinto usindisa crew yethu ekuthunjweni amaNazi.
Wadlala indima uhlamvu elikhanyayo kakhulu kusukela uchungechunge sethelevishini "emathangini avuzayo amane inja" Frantishek Pechka, iziqu Ephakeme Theatre School waseWarsaw. Ngemuva emahlombe - imikhiqizo eminingi ethiyetha, futhi ezingaphezu kwekhulu amafilimu. Wayengumuntu ngisho lucky ngokwanele ukudlala ku-movie we uPetru. Frantishek Pechka ukhishwa imiklomelo zokuhlonipha eminyakeni ezahlukene.
Okuwukuphela comrades non-Polish e crew ngokuthi Gzhesem (Polish style, amancane ka Grzegorz). Georgians ngobuzwe, yena umsebenzi wakhe - umshayeli-umakhenikha. izakhamizi Polish, uthi, aze azalwe e Sandomierz - nje kakade ukhathele etshela abantu iphi Georgia. Njengazo zonke kwabaMhlophe, it is zihlukaniswa uhlamvu yayo uyisififane. Futhi uyazi ukuthi ukushayela ithangi, efana bembalwa kakhulu, futhi nakuba bonke abasebenzi ukulwa ukunamathela ngensimbi yakhe umshini, umphefumulo ku "iba nsundu ngokubomvu" emkhonzayo kakhulu. Lwathi luphela isiphetho movie amyise opharetha Lidka umsakazo.
Kodwa udlale lokhu kushisa futhi ebukekayo Georgian Polish ifilimu kanye yaseshashalazini umlingisi - Wlodzimierz Cindezela. Njengamanje uhlala Warsaw. Active Entreprise, wahlanganyela dubbing amafilimu. Futhi Wlodzimierz Cindezela usebenzela umsakazo.
Ngokuhamba kwesikhathi, njengoba Janek kwaba induna crew, indawo umsakazo wakhe opharetha-umdubuli kambayimbayi wathatha kanzima zokusebenza nendodana ongumlimi kwezomnotho sika - Tomasz Chereshnyak, noma, njengoba kamuva eyabizwa ngokuthi i-comrade, Tomek. Naphezu alula sobala, it sizobonisa ngokwayo ngendlela engcono.
ukudlala Ngokuphawulekayo le inkositini umlingisi kusukela movie "emathangini avuzayo amane inja" (nabalingisi ukuthi ihlanganise nabalingiswa abasemqoka, unezela ohlwini yayo inkambo) ehlanganiswe esikrinini ubuye yaseshashalazini Polish, ezinyakazayo isithombe, umsakazo nethelevishini Wieslaw Golas. Njengoba ayebe kunombolo umxhwele imidwebo, uye wathola imiklomelo eminingi.
"Red" futhi inja yethu ...
Futhi-ke, ibhola! zihlakaniphile uMalusi German futhi ilungu agcwele crew ethangini, "Red." Janek bamlethela umuntu ovela eSiberia, lapho ibhola waba umngane wakhe kweqiniso. Inja ngaphezu kwesikhathi esisodwa sewuzilondolozile isikhathi nezisebenzi ekuletheni imibiko. Chetyrehlapy umlingisi ngakho wayethanda izilaleli, abalandeli emihlanganweni kanyekanye abaculi njalo ukuba ushiye izinyathelo phezu izithombe ngalezi zinhloso ngisho wenza umcamelo ekhethekile ngoyinki. Nokho, walalela reincarnating isethi, inja ngemva amahlanu ezinjalo "Autographs" waqala ayithi klabe Umqeqeshi wakhe ngokukhathazeka futhi abanye ukukhungatheka, ukuze ezingaphezu kwamashumi amahlanu "ngezidladla" ngosuku azisebenzi.
"Three nabasePoland, Georgians futhi inja"
Naphezu uchungechunge ubungani "emathangini avuzayo amane inja" abadlali akuvamile wahlangana ngemuva kokudubula, ngulowo lalowo ngendlela yakhe. Kodwa lokho akusho kusivimbe ibuyela amaqhawe abo, ngoba kule ukukhanya (ngaphakathi spite of ukulandelwa empini) izindaba amathangi ezine basePoland umngane oqotho yabo PSE amabhola kwakhula kuka kwesinye isizukulwane. Lesi sithombe ngokuqiniseka wathatha endaweni esekusithekeni ezinhliziyweni eziningi abathandi movie. Futhi akukho okuyovimba kusasa, futhi mhlawumbe ngisho namuhla, hlala phansi empeleni adabuke lokhu ifilimu kancane kuwubuwula futhi kuyisidala elula mayelana nobungane, usizo mutual nothando.
Zac Efron - Filmography. Tindzima esemqoka kanye namafilimu best of Zaka Efrona
Yulia Rutberg: Filmography, biography nokuphila kwangasese (isithombe)
Isidleke Hornet sika efulethini: ukwenza ngokushesha
Directory abangenayo: Amakolishi Samara
Cafe "Sukhumi": Chelyabinsk iyakwamukela izivakashi!
Indleko inzuzo kuhlahlela inkampani - ngesisekelo sokuthuthuka
Indlela ukupheka Mash ekhaya